မေးမြန်းချက် Archives > Page5of7> မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် (page 5)
July 28, 2015 မေးမြန်းချက် 0
လက်ရှိတစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး NCCT ခေါင်းဆောင်နှင့် SD အဖွဲ့ဝင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုဥက္ကဌ “နိုင်ဟံသာ”နှင့် လွတ်လပ်သောမွန်သတင်း အေဂျင်စီ IMNA အယ်ဒီတာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် အပြည့်အစုံဖြစ်ပါသည်။
ကော်မရှင်စား သုံးလုံးချဲထီရောင်းသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
April 19, 2015 မေးမြန်းချက် 0
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ (________) ရွာတစ်ရွာ၌ သုံးလုံးချဲထီကော်မရှင်စားတစ်ဦးနှင့် ဒေသခံ IMNA သတင်းထောက်တို့ ယခုတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွင် ကာယကံရှင်များ၏ အမည်နှင့် လိပ်စာတို့ကို မဖော်ပြတော့ပါ- (အယ်ဒီတာ) IMNA- သုံးလုံးချဲထီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြာပါလား- —–ကျွန်တော်ဒီသုံးလုံးထီး (ချဲ) ရောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်လာတာ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်ကနေ ဒီနေ့အထိပါပဲ၊ ဒီအလုပ်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်မိသားစုအတွက် တဖက်တလမ်းဝင်ငွေ ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ ဒီချဲ (သုံးလုံးထီ) က တစ်လကို နှစ်ခါထွက်တယ်။ လလယ်ပိုင်း (၁၆) ရက်တစ်ခါ၊ လဆန်းပိုင်း (၁) ရက် တစ်ခါ ထွက်တယ်။
November 30, 2014 မေးမြန်းချက် 0
IMNA-အခုလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အခြေခံဥပဒေပြင်ရေးကို ဦးတည်ပြီး ၆ ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ် အဘ။ဒီအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦး အနေနဲ့ သုံးသပ်ပေးပါဦး? နိုင်ငွေသိမ်း– ပြောနေတာ အမျိူးမျိူးပေါ့ဗျာ၊ တပ်မတော်က တစ်မျိူး သမ္မတက တစ်မျိူး လွှတ်တော်က တစ်မျိူး အခုအစိုးရကလည်း အမျိူးမျိူးလုပ်နေတယ်၊ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကလည်း တစ်မျိူးကြိုးစားတယ်ပေါ့၊
November 27, 2014 မေးမြန်းချက် 0
၆ ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိူးသားပါတီ ခေါင်းဆောင်၊ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိူးများမပာာမိတ် အဖွဲ့ (UNA ) သဘာပတိ အဖွဲ့ဝင် ဦးအေးသာအောင်နဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ညရ နာရီ အချိန်က IMNA သတင်းထောက် စောဇင်ညီက သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ IMNA-အခု၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်သူလွှတ်တော်က ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအပေါ် အန်ကယ်အနေနဲ့ ကြိုဆိုပါသလား ဘယ်လို သဘောရ ပါသလဲ? UATA –အခု ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို ယေဘူယျ အနေနဲ့တော့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေက အကျပ်အတည်းတွေဖြစ်နေတယ်၊ …
November 18, 2014 မေးမြန်းချက် 0
July 30, 2014 မေးမြန်းချက် 0